I-China Fused Silica Umkhiqizi Nomhlinzeki | I-Dinglong
I-Dinglong fused silica iyi-silica ephezulu ehlanjululwe ngogesi. I-silica ehlanganisiwe inokuqina okuphansi, ukuqhuba okuphansi kokushisa nokuqina okuhle kakhulu kokushiswa kokushisa. Lezi zakhiwo zikwenza kube into ewusizo kakhulu futhi esebenza ngezindlela eziningi yokusetshenziswa ku-Refractory, Foundry, Electronics kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezikhethekile. I-silika ehlanganisiwe ye-Dinglong iyatholakala kuzo zombili izinhlobo zofulawa nezinhlamvu.
Kutholakala kuzo zombili izinhlobo zofulawa nezinhlamvu
Izinto eziguquguqukayo zokusetshenziswa kuhlelo lokusebenza lokuphikisa
Kutholakala ekusabalalisweni kosayizi bezinhlayiyana ezijwayelekile nezingokwezifiso
I-Dinglong fused silica yenzelwe ukumelana kahle kokushisa, ukushisa izakhiwo, kanye ne-coefficient ephansi yokwanda okushisayo. I-silica yethu ehlanganisiwe isebenza kahle kakhulu kuzicelo ezinokuphikisa ezidinga ukuqina kobukhulu nalapho kudingeka khona ukugcinwa kokushisa.
Ekusakazweni kokutshalwa kwezimali, i-silica ehlanganisiwe isetshenziselwa ukuqina kwevolumu yayo. Ngempela, i-silica ehlanganisiwe ine-coefficient yokwanda okushisa okuphansi kakhulu futhi ngakho-ke ukuqina kokubekezelelana okuqinile kungakhiqizwa ngokususwa kwegobolondo okulula.
I-silica yethu ehlanganisiwe ine-resistivity ephezulu kakhulu kagesi kanye ne-conductivity ephansi yokushisa, ngakho-ke isetshenziswa njengokugcwalisa kuma-epoxy molding compounds for semi-conductors.
IDinglong ikhiqiza imikhiqizo enhlobonhlobo ye-silica namamaki womkhiqizo athile, kufaka phakathi ibanga lokufaka isicelo, ibanga le-elekthronikhi, ibanga lesisekelo. Yonke imikhiqizo ye-silica ehlanganisiwe ikhiqizwa ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokucophelela futhi yenzelwe ukuvumelana nokuthembeka ukuze ivumele amakhasimende ethu ukuthi enze imikhiqizo ngokuhlanzeka okuphezulu nangezinga lokunemba okuthe ngce.
I-silika ehlanganisiwe ye-Dinglong iyatholakala kuzo zombili izinhlobo zofulawa nezinhlamvu. Sinikeza ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezijwayelekile nezingokwezifiso. Ochwepheshe bethu bazosebenza nawe ukwengeza uhlelo lwakho lokusebenza. Imikhiqizo ye-silika ehlanganisiwe ye-Dinglong iyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Lezi zinto zokwakha ezihlanganisiwe zenziwa esikhungweni esiqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Sihlanganiswe ngokuphelele ukuqinisekisa ukulawula okuphelele kwekhwalithi nobuqotho bezinto zethu ze-quartz kusuka emayini kuya kumakhasimende. Sineminyaka engaphezu kwengu-30 yesipiliyoni ekwenzeni izinto zokwenza i-quartz futhi sizibophezele ekusebenzeni ngokuqhubekayo ukwenza ngcono izinto zethu ze-quartz ngokubambisana namakhasimende ethu.
Langaphambilini I-Silica ehlanganisiwe yohlelo lokusebenza lokuphikisa
Imboni yeSilica ehlanganisiwe
Umakhi we-Silica owenziwe
Intengo ye-Silica ehlanganisiwe
Imikhiqizo ye-Silica ehlanganisiwe